MAc-OS | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label MAc-OS. Show all posts
Jailbreak iOS 7.1.2 with Pangu
iOS 7.1.2 ကို Pangu ကိုသုံးပြီး Jailbreak လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်ကို အောက်မှာ ပုံတွေနဲ့ ပြထား ပါတယ်။
Mac and Windows အတွက် ဒေါင်းလင့်ကို အောက်ဆုံးမှာ အရင်သွားဒေါင်းလိုက်ပါ။
ပြီးရင်ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း လုပ်ဆောင်သွား လိုက်ပါ။
The jailbreak process will begin automatically once the changed date has been detected.
When the device reboots, you’ll find the familiar brown Cydia icon waiting for you to use.
Just launch Cydia and you’re ready to go (note the device may reboot again when Cydia is initially launched).
Click to Download Pangu for Mac and Windows
From: အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်) by ရန်ကုန်သား
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, July 02, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ iDevice, iPhone, MAc-OS, Phone Application
Zawgyi Font and Keyboard for Mac
After download and run, user should read ‘Read Me First’ file in dmg file
dmg file ကို စတင် run ပြီးတဲ့ အခါ read me first မှာ ထည့်ရမယ့် ပုံစံအဆင့်တွေ ပါပါတယ်။
Mac User အသစ်များ အတွက် Mac မှာ မြန်မာစာ အဆင်ပြေစေဖို့MacMyanmar keyboard တစ်ခု နဲ့ 
zawgyi font ကိုအလွယ်တကူထည့်နိုင်ဖို့dmg file လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ OS X Mavericks အပါအဝင်
Intel Base Mac များမှာအစဉ် ပြေပါတယ်။
ဒီ MacMyanmar.dmg File အသစ်မှာ
Viber, latest Browser versions အသစ်များနဲ့အစဉ်ပြေသော zawgyi font ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။
viber မှာ မှားနေတဲ့ ‘ေ’ နဲ့ ‘ာ’ စာလုံးတွေကို အမှန်ရိုက်နိုင်အောင်ပြင်ပေး ထားပါတယ်။
MacMyanmar Keyboard Layout အသစ်ကိုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
MacMyanmar အသစ်မှာ အက္ခရာအထပ်များကို option, option+shift တွဲသုံးပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် dead key or tide key (~) နှိပ်ပြီး key or shift + keyနိုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
caps lock နှိပ်ထားလျှင်လည်း shift နှိပ်ထားသကဲသို့သုံးနိုင်ပါတယ်။
keyboard layout jpg file ပါဝင်ပါတယ်။
new user များအတွက် user guide ဖြစ်တဲ့ Read Me First ပါဝင်ပါတယ်။
on-screen keyboard နဲ့တွဲပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ MacMyanmar Keyboard သုံးနေစဉ် command+key shortcut မရပါ။ smart features များမရပါ။
setting လုပ်ပုံလုပ်နည်းများကို DMG File ထဲက Read Me First ထဲမှာထည့်ဿပေးထားပါတယ်။
viber မှာစာမြင်ဖို့တော့ ဒါ run ပေးရပါ့မယ်။ပြီး Update FallBack နိုပ်ပေးပါ။ viber မသုံးချင်တဲ့
ဒါ run ဖို့ကိုတော့ > System Preferences > Security & Privacy > Anywhere ရွေးပေးဖို့လိုပါတယ်။
credit to Htain Lin Shwe
Internet for Myanmar by Kaung Khant
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, December 29, 20132comments:
ကဏ္ဍ MAc-OS, မြန်မာကီးဘုတ်, မြန်မာဖေါင့်
Mac ပေါ်မှာ windows ကို boot camp နဲ့ မတင်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် parallels desktop
Parallels Desktop ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိ၏ Mac ကို restart ချစရာ မလိုပဲ MacOSX နဲ့
Windows ကိုနှစ်မျိုးလုံး တစ်ပြိုင်နက်ထဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ Windows နဲ့ MacOSX နှစ်မျိုးလုံး
သုံးနေရသူတွေ အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာစေ ပါတယ်။
Boot camp ထက် နောက်ထပ် အားသာတဲ့ အချက်ကတော့ windows platfrom သာမက
linux platfrom os တွေကိုပါ အထောက် အပံ့ပေး ထားပါတယ်။ Android OS နဲ့ Chrome
OS အသုံးပြုလိုသူတွေ အတွက်လဲ တစ်ခါတည်း download လုပ်နိုင်အောင် ပါဝင်ပါတယ်။
Windows နဲ့ Mac ကြားမှာ Drag and Drop, Copy - Paste, အစ ရှိတာတွေ လုပ်လို့ ရပါ
Parallels မှာ Full Screen Mode နဲ့ Coherence ဆိုပြီး mode နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
Full Screen Mode ကို အသုံးပြုမယ် ဆိုရင်တော့ တစ်ခြား OS ကို workspace သတ်သတ်
ခွဲပြီး full screen mode နဲ့ အလုပ် လုပ်ပါတယ်။ Coherence Mode မှာတော့ windows
app တွေကို Mac Desktop မှာပဲ run ပါတယ်။
မိမိ ကြိုက်သလို စိတ်ကြိုက်ထားနိုင်ပြီး အချိန်မရွေး၊ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Parallels Desktop ကို Parallels မှာ $79.99 နဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Trial အနေနဲ့သုံးချင်ရင်
2 weeks ပေးသုံးထားပါတယ်။ Parallels Desktop 8 ရှိသူများအနေနဲ့ ကတော့ နောက်ထပ်
$49.99 ပေးပြီး Parallels Desktop9သို့ upgrade လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဝယ်ယူရန် အဆင်မပြေရင်တော့ အောက်က crack version ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
From: Internet for Myanmar by Kaung Khant
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, December 29, 2013 1 comment:
Tiny Umbrella သွင်းရာမှာ အများဆုံး ဖြစ်တတ်တဲ့ Error နှစ်မျိုး ဖြေရှင်းနည်း
ပန်းသီးသမားတွေ အတွက် Firmware အတက် အဆင်း အေးအောင်ဆိုပြီး ထီး (Tiny Umbrella)
Tiny Umbrella သွင်းရာမှာ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ Error နှစ်မျိုးဖြေရှင်းနည်းလေးကို ပြန်လည်ဝေမျှပေး
ကျွန်တော်လည်း ဒီ error နှစ်မျိုးပဲ ကြုံဖူးတာပါ။ တခြား error တော့မကြုံဖူးလို့ မသိသေးပါ :)
Tiny Umbrella မရှိသေးရင် အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ။
1-No JVM could be found on your system အတွက်ဖြေရှင်းနည်း
ဒီ error က ကိုယ့် ကွန်ပြူတာမှာ Java မရှိတဲ့ အတွက် error တက်တာပါ။
ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Java ဒေါင်းပါ။
64-bit သမားတွေကတော့ Java ကို 32 ရော 64 ရော နှစ်ခုစလုံးသွင်းရမှာပါ။
32-bit သမားကတော့ Java ကို 32 သွင်းယုံနဲ့ ရပါတယ်။
No JVM could be found on your system ဆိုတဲ့ ပြသနာက ဒီမှာတင် ပြီးပါပြီ။
ဒီ error ပြီးသွားတော့ တချို့ စက်တွေမှာ Tiny Umbrella ကို ချက်ချင်းသုံးလို့ မရသေးပဲ အောက်က error
2- Unable to validate libraries အတွက် ဖြေရှင်းနည်း
လိုအပ်တဲ့ tool ကို အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပါ။
ဒေါင်းပြီးလို့အဲ့ tool ကို Install လုပ်ရင် အောက်က ပုံလိုပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်။
1- Browse ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ့်ကွန်ပြူတာရဲ့Profile (Folder လေးနဲ့ လူပုံ တွဲထားတဲ့ icon) ရှိတဲ့ နေ
2- ရွေးပြီးရင် Extract ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
From: အမျိုးကောင်းသား by ခေတ်သမိုင်း
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, December 29, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ iDevice, iOS, MAc-OS, နည်းပညာ
iOS Tool Collection For Window & Mac
Jailbreak Tools နှင့် iOS နှင့် ပက်သက်သော Tools အားလုံးကို စုစည်းထားပါတယ်။ လိုချင်သူ
များအတွက် Tools တွေကို Version စုံစုံလင်လင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်လင့်အဆင်မ
ပြေတာ သေနေ ပါက ကျွန်တော်ရဲ့ အီးမေးလ် harrisnyi.41@gmail.com သို့ ဆော့လ်ဝဲ နာမည်
www.harrisnyi.tk သို့လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်၊
အသစ်တင်တိုင်း Facebook ပေါ်မှာ သိရှိနိုင်ရန် ဒီမှာ like လုပ်နိုင်ပါတယ်၊အဆင်ပြေပါစေ။
Evasi0n7v.1.0.1 - iOS7- 7.0.4 Untethered Jailbreak
Box.com => Windows • Mac OS X
Mega.co.nz => Windows • Mac OS X
Evasi0n - iOS 6.0-6.1.2 Untethered Jailbreak
Box.com => Linux • Windows • Mac OS X
Mega => Linux • Windows • Mac OS X
RapidShare => Linux • Windows • Mac OS X
RedSn0w 0.9.15 beta3Mac • Windows
RedSn0w 0.9.15 beta2Mac • Windows
RedSn0w 0.9.15 beta 1 Mac • Windows
RedSnow 0.9.13 dev4Mac • Windows
RedSn0w 0.9.13 dev3Mac • Windows
RedSn0w 0.9.12 beta 2: Mac • Windows
RedSn0w 0.9.12 beta 1: Mac • Windows
RedSn0w 0.9.10 beta 8b: Mac • Windows
Absinthe 2.0.4: Mac - Windows - Linux
Absinthe 2.0.2: Mac - Windows - Linux
Absinthe 2.0.1: Mac - Windows - Linux
Absinthe 2.0: Mac – Windows – Linux
Absinthe v0.4: Mac - Windows - Linux
Absinthe v0.3: Mac - Windows - Linux
Absinthe v0.2: Mac – Windows
Absinthe v0.1.2-2 (Mac only)
Absinthe v0.1.2-1 (Mac only)
Sn0wBreeze 2.2 (+ .NET Framework 3.5 required to run Sn0wbreeze)
V1 (+ .NET Framework 3.5 required to run Sn0wbreeze)
Seas0nPass: Mac – Windows
Ac1dSn0w Beta 2
LimeRa1n for Windows
GreenPois0n RC5 b4: Mac – Windows
GreenPois0n RC5: Mac – Windows
Spirit for Windows
QuickPWN 2.2.1 for Windows
QuickPwn ’150′ Beta Update
From: အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်) by Harris Nyi
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, December 27, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ iOS, MAc-OS, Tools, Window
iZotope RX3Advanced v3.01 Mac OS X Full With Crack
ဒါလေးကတော့ iZotope RX3Advanced v3.01 Mac OS X လေးပါ။
Mac OS X အသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
iZotope RX3Advanced v3.01 Mac OS X | 335 MB
davvas AFileZ hugefiles billionuploads
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, November 27, 2013 No comments: